Nhau - Polymers anodzivirira mhute inogona kuva nenjodzi panguva yekushanya kwamazino
Munguva yedenda, dambudziko remadonhwe emate emoseti muhofisi yemazino rakanyanya
Mune bepa rakaburitswa svondo rino muFizikisi yeFluid, neAIP Publishing, Alexander Yarin nevamwe vake vakaona kuti masimba echinhu chinozungunusa kana chibooreso chemazino hachienderani nemamiriro episcoelastic emapolymers ezvekudya, akadai se polyacrylic acid, ayo ivo vaishandisa sediki musanganiswa kudiridza mumazino marongero.
Mhedzisiro yavo yaishamisa. Kusanganiswa kudiki kwema polymers hakungogumise zvachose kuomesa mweya, asi kwakangoita zvirinyore, kuratidza yakakosha polymer fizikiki, senge coil-kutambanudza shanduko, iyo yaishandira chinangwa chakatarwa zvakanaka.
Vakaedza mapolymer maviri anogamuchirwa neDFA. Polyacrylic acid yakaratidza kuve inoshanda kupfuura xanthan chingamu, nekuti mukuwedzera kune yayo yakareba elongational viscosity (yakakwira elastic stresses mukutambanudza), yakaratidza yakaderera sheari viscosity, iyo inoita kuti kupomba kuve nyore.
"Chaishamisa ndechekuti kuyedza kwekutanga mubazi rangu kwakaratidza zvachose pfungwa iyi," akadaro Yarin. “Zvaishamisa kuti zvishandiso izvi zvaikwanisa kupomhodza uye kudzikamisa zvachose michina yekushandisa mazino, zviine masimba akakosha asingaite. Kunyange zvakadaro, simba rinobva pazvinhu zvakagadzirwa nepolymer zvakawedzera. ”
Kudzidza kwavo kwakaratidza kuputika kwechisimba kwemapombi emvura anopiwa kumeno nemazino izvo chishandiso chemazino chinogonesa. Mhute inosasa inoperekedza kushanya kwachiremba wemazino mhedzisiro yemvura inosangana nekuzunguzika kwechimbi chimbi kana simba re centrifugal rekuboora, rinoputika mvura kuita tumadonhwe tudiki uye rinofambisa izvi.
Iko kusanganisa kwepolymer, kana kuchishandiswa kudiridza, kunodzvinyirira kuputika; pachinzvimbo, ma polymer macromolecule anotambanuka kunge mabhandi erabha anotadzisa mvura kuomesa. Kana muromo wechigadzirwa chinozunguzika kana chibooreso chemazino chikanyura mukati meiyo polymer solution, mhinduro yacho tambo kuita tambo dzakafanana nenyoka, idzo dzinodhonzwa kudzokera kudivi rechombo, zvichichinja masimba akajairika anoonekwa nemvura yakachena mumazino.
“Kana madonhwe achiedza kuzvibatanidza nemuviri wemvura, muswe wedonhwe unotambanuka. "Ndipo panotangira masimba akakosha akasimba neiyo coil-kutambanudza shanduko yemapolymer macromolecule," akadaro Yarin. "Dzinodzvinyirira muswe uye dzinodhonzera donhwe kumashure, zvichitadzisa zvachose kuomesa mweya."
Zvishandiso zvinopihwa neAmerican Institute of Physics. Ongorora: Zvemukati zvinogona kugadziridzwa zvechimiro uye urefu